भुकम्पले ढ’ला’एपछि ७० लाख खर्च गरेर बनाएको घर क्षणभरमै ब’गर ब’न्यो : आँ’सु रो’किएका छैनन् ! – Life Nepali
भुकम्पले ढ’ला’एपछि ७० लाख खर्च गरेर बनाएको घर क्षणभरमै ब’गर ब’न्यो : आँ’सु रो’किएका छैनन् !
मेलम्ची । मैले ढाका टोपी । ति’लचा’म्ले कपाल । खि’रि’लो जि’उज्या’न । आकाश धु’म्मि’एजस्तो अनुहार । यतिले मात्रै उनको परिचय पूरा हुँदैन । सिन्धुपाल्चोक, मेलम्ची बजारका यी वृद्ध लयमा उकालो लाग्दै गरेका गोपाल दुलालको अर्को परिचय पनि थपिएको छ, बाढीपी’डि’त । २०७२ सालको विस्मयकारी भूकम्पले उनको घर–गोठ ख’ण्ड’ह’र तु’ल्या’यो । धूलो ट’क्ट’क्या’एर उठ्न उनलाई झण्डै चार वर्ष प’र्ख’नुपर्‍यो । यसबीचमा उनले ब’गा’ए’को प’सि’ना बे’हिसा’ब छन् ।
तर, दुई वर्ष नबित्दै उनलाई अर्को ब’ज्र’पा’त परेको छ । उनी अहिले आँखै अगाडि ब’ग्दै गरेको घर, पसिना ब’गा’ए’र उब्जायो’ग्य तु’ल्या’एको खेत ब’गर बनेको हेर्न अ’भि’श’प्त छन् । “हिजो राति सबैजना झि’टी–गु’न्टा गु’ठा’ए’र हिँडे । ला’ला’बा’ला च्या’पे’र सुरक्षित स्थानतिर लागे । मचाहिँ ब’गा’ए पनि ब’गा’ओस् भनेर नि’च मा’रे’र यहीँ बसेँ । जानु पो कहाँ थ्यो र ?,” उनको बोलीमा अ’नि’र्व’च’नी’य पी’डा झ’ल्क’न्छ ।
झण्डै ७० लाख खर्च गरेर उनले तीन तला घर उ’भ्या’एका हुन् । अझै निर्माण कार्य पूरा हुन बाँकी छ । रङरोगन नसक्दै बाढीले उ’ठेर जा.. भन्न आएपछि आफू नि’रु’पा’य भएको र प्रकृतिसँग हा’त जो’डे’र या’च’ना गर्नुबाहेक अरू विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । “घर नजिकै पीपल रोपेको छु । मेलम्ची बजारको दु’र्दा’न्त हेर्दा मेरो घर कसरी ब’चि’र’हे’को होला लाग्छ । यसो सोच्छु आज रातिसम्म त प’क्कै लगिहाल्छ,” उनी भावुक हुँदै सुनाउँछन्, “केही गर्न सकिँदो रहेनछ त !”
उनी वृ’द्धतिर उकालो चढ्दैछन् । झण्डै १२ जनाको परिवार छ । छोरा–नातीकै लागि भनेर केही जा’य’जे’था बेचे । केही ऋ’ण गरेर घर उ’भ्या’ए । अहिले घरछेउबाट खोलो हिँड्दा मन त्यसैत्यसै भ’क्का’नि’ए’र आएको छ । डाँ”को छा’डेर रु’न मन लागेको छ । घर मात्रै लगे त फेरि उ’भ्या’उ’न हुन्थ्यो । भूकम्पले ढ’ला’ए’को घर पनि उनले मिहिनेतले उ’भ्या’ए’कै हुन् । घर वरिपरिको साढे दुई रोपनी खेत पनि ब’ग’र बन्न लागेपछि उनलाई प्रकृतिदेखि उ’दे’क लागेर आएको छ । छातीमा आ’क्रो’शको ज्वा”ला द”न्कँ’दो छ । नि”र्धोलाई नै ङ्या”क्ने प्रकृतिको प्रवृत्ति देखेर एक मन त उनलाई वि”र’क्त पनि लाग्छ । तर, अहिले आफ्नो मात्र होइन भनेर आफैँलाई था’म’थु’म पारेका छन् ।’
“मेरो घरबाट खोलामा पुग्न झण्डै दसमिनेट लाग्थ्यो । अहिले करेसामा खो’लो सु”सा’इ’रहेको छ । कतिबेला लाने हो प”त्तो छैन । त्यत्रो बजार ब’ग’र बनाइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “अरूको हेरेर पनि चि’त्त बुझाएको छु ।” पहिराको ड”रले भू’कम्प गएको थ’लोमा घर नबनाएका उनले खो’लाको मु’खमा परिएला भनेर कहिल्यै सोचेनन् । सोचुन् पनि कसरी ! इ’न्द्रा’वतीको त्यो रूपसँगको उनको सा’क्षा’त्का’र कहिल्यै भएको थिएन । “सबैथोक गु’मा’एप’छि सरकारको बाटो हेर्न मन लाग्दो रहेछ । सक्ने हुँदा सरकारको बाटो हेरिएको पनि थिएन,” उनी हा’रमा’न्नु हुँदै सुनाउँछन्, “सरकार ! हामी बोल्न जान्दैनौँ । घर व्यवहारले थि’चे’को छ । ऋण छ । तिर्ने आधार खोलाले खाइदिइहाल्यो । हामी बोल्न पनि जान्दैनौँ । हामीलाई हेर है ।”– बाह्रखरी – अक्षर काका
Previous पुरुषले ६० वर्षमा बिहे गर्दा हुने महिलाले किन नहुने ?
Next यी नै हुन दुई कलिला मुनाहरु बाख्रा चराउन गएका थिए : पहिरो ले सधैंका लागि लगेर गयो ।